05 Mar, 2020 - 11:03 2020-03-05T11:36:25+00:00 2020-03-05T11:36:25+00:00 0 Views
Vanhukadzi hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza Afri- can Woman of the Year.
Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvi- pfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwinha mibairo inosan- ganisira zvitofu, mazakwatira emari pamwe chete nemachira ekusonesa zvimwe zvipfeko. Mifananidzo iyi ngaipereked- zwe nefomu rinenge rachekwa kubva muKwayedza.
Musakanganwe kuped- zisa mutsara uri pafomu iri uye kuisa zita renyu, nhamba dzepamunogara pamwe chete nedzenhare. Zvaka- wanda nezvemakwikwi aya onai sekushambadzwa kwaz- vakaitwa pazasi. Mifananidzo inotumirwa ichaburitswa muK- wayedza svondo rega-rega dakara tasvika pakuhwinwa kwemibairo gore rino.
Madzimai pindai mumak- wikwi aya muhwine!